Zidane oo u hanjabay kooxda Liverpool kahor isku aadka wareega 16-ka ee taranka Champions League – Gool FM
Zidane oo u hanjabay kooxda Liverpool kahor isku aadka wareega 16-ka ee taranka Champions League
Dajiye December 12, 2019
(Madrid) 12 Dis 2019. Zinedine Zidane ayaa shaaca ka qaaday inuusan wax walwal ah ka qaabin kooxda ay kaga beegmi doonto Real Madrid wareega 16-ka ee tartanka Champions League.
Kooxda Real Madrid ayaa saddexda dhibcood ka soo qaadatay naadiga Club Brugge oo ay booqatay, waxayna kaga soo adkaatay 1-3, Los Blancos ayaa goolasheeda waxay kaga mahadcelineysaa xiddigaheeda kala ah Rodrygo, Vinicius Jr iyo Luka Modric.
Isku aadka wareegga 16-ka Koobka horyaallada Yurub ee UEFA Champions League ayaa la sameyn doonaa 16-ka bishan December oo ku beegan Isniinta soo aaddan, waxaana lagu qaban doonaa xarunta xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA oo ku taala magaalada Nyon ee Waddanka Switzerland.
Macalinka Los Blancos ee Zinedine Zidane ayaa la weydiiyay su’aal ku aadaneyd kooxda uu door bidayo inuu ku wajaho wareega xiga 16-ka ee Champions League, wuxuuna sheegay in kooxdiisa ay awood u leedahay inay garaacdo xitaa kooxda difaacaneysa tartankan ee Liverpool.
Macalinka reer France oo ka hadlayay isku aadka wareega 16-ka ee tartanka Champions League ayaa wuxuu ku kaftamay:
“Haddii aan la ciyaarno xitaa Liverpool waxaan ka ciribtiri doonaa tartanka, waxba kama qaban karno isku aadka”.
Si kastaba ha noqotee Real Madrid ayaa ku dhameystay group-ka A kaalinta labaad, kaddib markii ay booska koowaad ku soo baxday kooxda PSG, taasoo ka dhigan inay ku beegmi doonto mid ka mid ah kooxaha kaalinta koowaad kaga soo baxay group-kooda sida Bayern Munich, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona iyo Leipzig, waxaana la ogaan doonaa kaddib marka la sameeyo isku aadka wareega 16-ka Isniinta soo socota.
Juventus oo doonaysa inay heshiis cusub ka saxiixato Higuain, xilli sidoo kale ay qorsheynayso inay yareeyaan Mushaharkiisa
Cristiano Ronaldo oo sheegay labada kooxood uu jeclaan lahaa inay isugu soo haraan finalka Champions League